Askari ka mid ah ciidamada daraawiishta ee Puntland oo hal sano oo xabsi ah lagu riday – Radio Daljir
Galkacyo,March 30 -Maxkamadda ciidamada qalabka sidda ee Puntland faraceeda Mudug iyo Cayn ayaa xukun hal sano ah ku riday askari katirsan ciidamada daraawiishta Puntland oo lagu soo eedeeyey inuu dhac u gaystay gaadiid dadwayne oo marayay degmada Xarfo ee gobolka Mudug.
Maxkmadda ayaa la horkeenay laba askari oo midkood lagu soo qabtay inuu caadaystay khatar dadwayne islamarkaana uu dhacay hanti ay leeyihiin dad shicib ah, askariga kale ayaa isaguna lagu soo qabtay inuu adeegsanayay maandooriyaha khamriga oo ay horay dowladda Puntland u mamnuucday isticmaalka iyo ka ganacsigiisa.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidda ee gobolada Mudug iyo Cayn Gaashaanle Aways Cabdilaahi Jaamac oo xukunka ku dhawaaqay ayaa tilmaamay maxkamadda oo cuskanaysa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee nambarkiisu yahay 484, 164 iyo xukunka shareecada islaamka inay xukun sanad ah ku riday eedaysane Mahad Cali Diiriye oo loo soo qabtay dhaca hantida shicibka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay eedaysanaha inuu u furanyahay racfaan muddo soddon cisho ah, waxaana uu sidoo kale tilmaamay in dib loo dhigay xukunka askariga lagu soo qabtay ka ganacsiga khamriga dhowaana maxkamadda la horkeeni doono.
25-kii bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay 2011 ayay ahayd, markii ugu horaysay ee maxkamadda ciidamada qalabka sidda ee Puntland laga furay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.